Orbi Cable Router CBR40 Mushandisi Chinyorwa - Manuals +
Orbi Cable Router CBR40 Mushandisi Chinyorwa
Posted byshasha January 13, 2021 January 21, 2021 Leave mhinduro pane Orbi Cable Router CBR40 Mushandisi Chinyorwa
musha » NETGEAR » Orbi Cable Router CBR40 Mushandisi Chinyorwa
1 Orbi Cable Router Muenzaniso CBR40
1.1 Set Up uye Activate NeNETGEAR Orbi App
1.2 Gadzira Yako Orbi Cable Router uye Satellite
1.3 Activate Yako Internet Service
1.5 Package Zviri mukati
1.6 Orbi Cable Router Ongorora
1.7 Orbi Satellite Kuongorora
1.8 Orbi Cable Router ma LED
2 Mamwe Mabhuku Akabatana:
Orbi Cable Router Muenzaniso CBR40
Set Up uye Activate NeNETGEAR Orbi App
Gadzira yako Orbi cable router uye satellite uye shandisa yako Internet sevhisi neNETGEAR Orbi app.
Kana iwe usiri kuda kushandisa iyo NETGEAR Orbi app, gadzira yako tambo router uye satellite uchishandisa iwo marongero ari Gadzira Yako Orbi Cable Router uye Satellite, uye shandisa Internet yako uchishandisa mirayiridzo iri mu Activate Yako Internet Service.
Shandisa QR code kana kutsvaga NETGEAR Orbi muApple App Store kana Google Play Store.
Dhawunirodha uye uvhure iyo NETGEAR Orbi app pane yako nharembozha uye uteedzere zvinokurudzira.
Gadzira Yako Orbi Cable Router uye Satellite
1. Unganidza yako Xfinity account ruzivo.
Unganidza yako Xfinity account ruzivo, senge yako account account mbozhanhare nhamba, mushandisi zita, password, uye account nhamba.
2.Dzima uye patsanura zviripo modem uye ma routers.
Kana iwe uri kutsiva modem iyo parizvino yakabatana mumba mako, buritsa modem uye plug iyo nyowani tambo router mune imwecheteyo nzira
3. Batanidza coaxial cable.
Shandisa coaxial tambo kubatanidza iyo tambo coax chinongedzo pane iyo tambo router kune tambo yemadziro kuburitsa.
4. Batanidza adapter yemagetsi.
Unganidza adapter yemagetsi kune waya waya uye ubatanidze iyo yemagetsi adapter mune yekubuda magetsi.
Maitiro ekutanga anotora ingangoita mineti imwe. Kana yapera, iyo Power LED mwenje yakasimba bhuruu.
5. Mirira iyo Online LED kubatidza bhuruu yakasimba.
Maitiro aya anogona kutora kusvika pamaminitsi gumi.
Cherechedza: Apo iyo Online Mwenje mwenje, yako tambo router haisati yakabatana neInternet parizvino. Iwe unofanirwa kumisikidza yako tambo router neXfinity.
6. Unganidza komputa yako kana nhare mbozha kuOrbi cable router ine Ethernet kana WiFi:
Ethernet. Shandisa tambo yeEthernet kubatanidza komputa kune iyo router.
WiFi. Shandisa iyo WiFi network zita (SSID) uye password pane iyo cable router chitaridzi kubatanidza.
INOKOSHA: Tinokurudzira kuti iwe uchinje iyo admin password kuti uchengetedze yako cable router.
Vhura web browser uye pinda vanosen.com or 192.168.1.1 mundima yekero yewebhu browser.
Kana hwindo rekupinda richivhura, pinda arun yezita remushandisi admin uye pasiwedhi yeiyo admin password.
Enda kune iyo ADVANCED chikamu uye chinja default password uye kumisa mibvunzo yekuchengetedza.
8. Shandisa Internet yako.
Kuti uwane ruzivo nezve maitiro ekumisikidza yako Internet sevhisi, ona Activate Yako Internet Service.
9. Isa yako Orbi satellite.
Isa setiraiti yako mukati meyuta yako yeWiFi uye wobva wasimbisa iyo.
Iyo satellite inoedza kuyananisa neako router.
10. Mirira satellite kuti iwirirane ne router yako.
Iyo satellite seti mheni yakatungidza mwenje apo iyo satellite ichiedza kuyananisa neiyo cable router.
Ipapo iyo mhete ye LED inovhenekera imwe yeanotevera mavara kweinenge maminetsi matatu uye obva adzima.
Cherechedza: Kana iyo mhete ye LED ichiri kuvhenekera magenta mushure memineti imwechete, tinya iyo Sync bhatani pane waya router uye pane satellite. Kana iyo satellite ichienderana neiyo cable router, iyo satellite seti mheni mwenje mwenje chena. Ringi ye LED inovhenekera bhuruu kuratidza kubatana kwakanaka yobva yadzima.
Activate Yako Internet Service
Usati watanga iyo yega-yekumisikidza maitiro, unganidza inotevera ruzivo:
Yako yeInternet service provider (ISP) ruzivo rwekambani
Cable router modhi nhamba, inova CBR40.
Cable router serial nhamba
Cable router MAC kero
Yako cable router router nhamba uye MAC kero iri pane iyo cable router chitaridzi.
Iyi inotevera tafura inonyora ruzivo rwekubatana rweIPs ayo anotsigira yako cable router.
Cherechedza: Yako ISP yeruzivo rwekuonana inogona kuchinja. Iwe unogona zvakare kuwana iyo yekudyidzana ruzivo mune yako yemwedzi pamwedzi sevhisi yeInternet sevhisi yekubhadhara.
Shanyira webhusaiti yako yeISP uye uteedzere iwo onscreen mirayiridzo yekumisikidza yako Internet sevhisi.
Kuti uone iyo chaiyo yeInternet kumhanya, shanyira yako ISP's yekumhanya bvunzo webhusaiti kana uye ita yekumhanya bvunzo.
Ndatenda nekutenga ichi NETGEAR chigadzirwa. Unogona kushanyira www.netgear.com/support kunyoresa chigadzirwa chako, kuwana rubatsiro, kuwana izvo zvazvino kutora uye zvinyorwa zvevashandisi, uye kujoina nharaunda yedu. Isu tinokurudzira kuti iwe ushandise chete zviri pamutemo NETGEAR rutsigiro zviwanikwa.
Vatengi-vane tambo tambo mairaira anogona kunge asingafambidzane nevamwe vevashandi veInternet service (ISPs). Tarisa neIPP yako kuti uone kuti iyi NETGEAR tambo router inobvumidzwa pane yako ISP network.
Si ce productit est vendu au Canada, vous pouvez accéder à ce document en français canadien à http://downloadcenter.netgear.com/other/.
(Kana chigadzirwa ichi chikatengeswa muCanada, unogona kuwana gwaro iri muCanada French ku http://downloadcenter.netgear.com/other/.)
Nezvezvino EU Chirevo Chekuenderana, shanya http://kb.netgear.com/11621.
Nezve mutemo wekuteerera kuteedzera, shanya http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Ona gwaro rekuteedzera rinoteedzera usati wabatanidza magetsi.
Package Zviri mukati
Orbi Cable Router Ongorora
Orbi Satellite Kuongorora
Orbi Cable Router ma LED
Orbi Cable Router CBR40 Mushandisi Chinyorwa - Yakagadziridzwa PDF
Orbi Cable Router CBR40 Mushandisi Chinyorwa - Yekutanga PDF
Mamwe Mabhuku Akabatana:
Orbi Cable Modem Router CBR750 Mushandisi Chinyorwa Kurumidza Kutanga Gwara Model CBR750 Seta uye shandisa uchishandisa ...
Orbi WiFi 6 DOCSIS 3.1 Cable Modem Router Dhata Sheet ...
Orbi Yese Imba yeWiFi Sisitimu Yakavakirwa muCable Modem CBK40 Mushandisi Chinyorwa Orbi Yese Imba WiFi Sisitimu Yakavakirwa muCable Modem CBK40 ...
WiFi Cable Modem Router C3700 Mushandisi Chinyorwa WiFi Cable Modem Router C3700 Mushandisi Chinyorwa - Optimized PDF ...
WiFi Cable Modem Router C3000 Mushandisi Chinyorwa WiFi Cable Modem Router C3000 Mushandisi Chinyorwa - Optimized PDF ...
C3700 WiFi Cable Modem Router Mushandisi Chinyorwa Kuisirwa Nhungamiro C3700 WiFi Cable Modem Router Package Zviri Mukati Batanidza ...
Posted byshasha January 13, 2021 January 21, 2021 Posted inNETGEARTags: CBR40, NETGEAR, Orbi Cable Router
Previous Post Previous mumhanyi;
Whirlpool W10648064A Gesi Cooktop Mushandisi Chinyorwa
Next Post Next mumhanyi;
AC1200 WiFi Cable Modem Router C6220 Mushandisi Chinyorwa
HEADRUSH Huru Canister Mutauri HRSP-5020 Yekudzidzisa Chinyorwa
Qualcomm Inokurumidza Charge Technology Chidimbu Chinyorwa
HamiltonBuhl Universal VR Remote Anodzora VRRC Mushandisi Wemabhuku
SentrySafe Moto-Yakachengeteka Mubatanidzwa / Keypad Chinyorwa
SentrySafe Lock Code Kuronga Mirayiridzo
Carol Vinson on PhotoShare Yakagadziriswa Mushandisi Chinyorwa
Simon Chipman on Skullcandy Spoke Mushandisi Chinyorwa
Sonja Dickey on Onn Earbuds 100005529 Mushandisi Chinyorwa [ONN5529. ONN5530]
SOLDIERX on Mpow M12 Yechokwadi Pasina Wireless Nzeve Yevashandisi Manual BH463A
dota on LG Mhepo Inodzora Remote Kudzora Chinyorwa